Ngo-May 2009, Quentin Tarantino esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi Cannes Film Festival tape yakhe yakamuva, okuyinto kamuva kakhulu ayazise baxgeki - ". Inglourious Basterds" Actor, Starring i-movie isinyathelo, thatha kuhle ezimibalabala:-Brad Pitt, Kristof Valts, Maykl Fassbender , nabanye abaningi. Lo mcimbi oyinhloko iphrojekthi ezakhiwa phakathi neMpi Yezwe II ngo-France.
Hans Landa, owayedume ngelika "iphisi lamaJuda", ngokungazelelwe okhokhela Ukuvakashela endlini lomlimi French, befuna ukuthola umndeni samaJuda Dreyfus.
Ngokushesha uthola amalungu omkhaya phansi futhi wayala amasosha ukuba adubule nabo. engu-Nesishiyagalombili Shoshanna isikhathi ukuthola of the yokukhosela aphunyuke phambi kwamehlo ababulali.
Phakathi naleso sikhathi, uLieutenant Aldo Reyn buthola ithimba amasosha Jewish abazalelwe eMelika ukuze enze mission amaphekula enhlabathini French matasa kuwo. Umsebenzi we umbimbi yokugcina yosuku - ukubhujiswa ngesihluku amaNazi. Ngokushesha ngemva usuyaziqaphela lamabutho e oMbusi - Aldo nozakwabo namuhla asebebizwa ngokuthi "bastard", ezamehlela zabo ukubika kuHitler. Lokho kwaba ekuqaleni yephrojekthi "Inglourious Basterds." Abalingisi ukwenza isenzo esikhulu, okuyindawo Asikwazi ukushalazela mayelana wesithathu ifilimu yesibili.
Ngo indaba isifika eminyakeni embalwa, futhi umbukeli ubona ukuthi Shoshanna, ngubani wakwazi ukuphunyuka, futhi manje uzenza waseFrance okuthiwa u-Emmanuel lwe-Mime. Ifa elivela uhlamvu isihlobo elikude ithola cinema encane. Le ntombazane uyazinaka sniper German Frederick Zoller, ubani maduze kukhanye ifilimu "Ukuziqhenya Kwesizwe", baveza yena. Leli sosha lafika base ulungiselela konke ngakho, ukuthi amafilimu kwesizini, okuyinto eza Hitler nabangane bakhe owawuba isikhungo lwe-Mime. Shoshanna enquma ukuthi ithuba ukuziphindiselela umndeni wakhe.
imibukiso Parallel lwendaba Reina, naye uyezwa umbukiso oluzayo futhi uhlose ukusebenzisa umcimbi izinjongo zabo. Oku-ithimba izobamba umhlangano actress wacela Bridget Von Hammersmark abakho wedwa, okungaholela ukuba kwesizini.
Omunye izindima esivelele kunazo ashisa izikhotha waya Bredu Pittu - echaza a baphikise Aldo Reyna, owayaziwa 'Apache ". Ngaphezu ovelele yakhe Eli Roth - iqhawe lakhe uSergeant Donnie Donovitts, owaziwa ngokuthi "UmJuda Bear" uyabethusa amaNazi, futhi ngenxa yokuthi kunezizathu ezinhle.
Ngakwelinye ihlangothi, Gédéon Burkhard kwaba ngomfanekiso Cpl Vilgelma Vikki. – немецкого военного-психопата Хуго Штиглица. Kakhulu uhlamvu ekhumbulekayo kudlalwa Til Shvayger - German lempi psychopath Hugo Stiglitz.
Nakuba Yiqiniso, kuba Kristof Valts kwaba kokutholakala mdwebo "Inglourious Basterds." Abalingisi, owawusekelwe indima ebalulekile i-movie isinyathelo, ayesevele aziwa kahle emphakathini, njengoba kuqhathaniswa indima umculi Hans Landa, ngubani nje lolungenamaphutsa abhekana ngayo umsebenzi walo!
Umdwebo wakwazi ukuqoqa ebhokisini ehhovisi emhlabeni wonke mayelana amadola ayizigidi ezingu amathathu namashumi, kanye uzishaya "Oscar" ukuphakanyiswa kwamagama eziyisishiyagalombili, umbhalo Tarantino.
Iningi wonke ama-award ngokubamba kwabo iqhaza ifilimu kwaba Walz: "U-Oscar" ngoba Kuhle Ukusekela actor, "Golden Globe" emkhakheni ofanayo, nezinye amaprimiyamu.
ngokushesha Quentin Tarantino ukuhlonza nalabo angathanda ukubona indima Albo Reina e ifilimu "Inglourious Basterds." -Brad Pitt wathatha ngowokuqala ngaphandle intshiseko isiphakamiso, bese umqondisi wangena ekhaya umlingisi, ngoxoxisana ukuba azisole. Kusolakala ukuthi udumo wayephuza amabhodlela ambalwa ewayini bese ekugcineni bafinyelela esivumelwaneni.
Eli Roth wabonakala njengoba umqondisi iphrojekthi.
Denis Ménochet waba ngowokuqala abeza audition for indima Perrier LaPadita - ekupheleni akwenza ukudlalwa.
Ukulandisa yayifundwa uSamuel L. Jackson.
Engamaphesenti angu-40 we-mpendulwano zalotshwa ngesiNgisi, futhi 28 - ngesiJalimane, elinye - French futhi Italian.
On ukudalwa Umdwebo
Kwaphela isikhathi eside Tarantino ayikwazanga beveza lokugcina, okuyinto uyoboniswa ukuba izibukeli iphrojekthi "Inglourious Basterds". Abalingisi ungase uqale umsebenzi isethi ngisemncane kakhulu, kodwa filmmaker alethwe irhuluphelo yakhe iminyaka iskripthi eziyishumi. Ngesikhathi esifanayo movie wadutshulwa ngezinyanga ezimbili.
Ekuqaleni kwathiwa bazitshela ukuthi isikhathi entsha umqondisi lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa zabasebenzi kuyoba imizuzu 190, kodwa ekugcineni ukuyeka imizuzu engu-153.
Ekuphetheni, kuyafaneleka ukuthi "Inglourious Basterds," okuningi isigcawu enobudlova futhi amahlaya emnyama, kodwa akuvimbeli kuye ekubeni ingxenye uyakufanelekela le Filmography ka Quentin Tarantino futhi sithole izigidi abalandeli!